Petersburg idume hhayi kuphela ngobungcweti bokwakhiwa kwezindlu zayo futhi izingosi zomlando. Kuzo zonke Russia kuyoba khona idolobha, ngakho kakhulu benamandla umoya bobuchule nezazi zanamuhla ngekwehlukahlukana kwalo. Enhloko-dolobha enyakatho, ukuphila kuyaqhubeka kancane kancane, kancane, kodwa lapha ukwazi ngempela indlela yokukwenza, ngakho-ke kuyajabulisa ukuba ngehlise umoya futhi baphuze.
Lesi sakamuva, ngenhlanhla eyatholakala kusukela izakhamuzi kahle. Akumangazi, ngoba nemishayo, ezinkantini kanye nezinye ezinkantini Petersburg yavama. Ungakwazi okungenani nsuku zonke ukuvakashela endaweni entsha futhi namanje ngeke ukundlula bonke. Mhlawumbe yingakho kukhona abaculi abaningi kangaka, abalobi, abaculi kanye nabamele amanye ubuchwepheshe yokudala, ehola inkulumo encane phezu ingilazi yewayini ezinhle noma ubhiya.
Esikhathini ezihlukahlukene ukukhetha lula kangaka ukuba ulahleke. Ungakhathazeki, sizokubonisa isiqondiso lapho ufuna ukuhambisa e ngoLwesihlanu ebusuku (futhi ngaluphi olunye usuku, kungcono uPetru), ukuze kube kuhle ukuchitha isikhathi futhi ujabulele ubhiya best edolobheni. Kukhona indawo eyodwa lapho lesi siphuzo oludakayo unake okukhethekile, noma kunalokho ngisho ukusho into esemqoka. Bar "Beer Ukuziphatha", etholakala eduze ethiyetha ekhonsathini "Vampuka" futhi edumile Pushkin Square, wona uyonifundisa zonke ukuthi ngandlela-thile exhunywe ne ubhiya. Qiniseka isikhathi esichithwa kule pub, aluphumeleli ngeze.
Abasunguli be-bar, a Olga mbhangqwana Anton, wakhulelwa ke njengoba indawo lapho izoqoqwa Ongoti wangempela ubhiya ezinhle kanye nalabo abafuna ngijwayele lesi siphuzo kangcono. Bar "Beer Ukuziphatha" (Marat, 14) yakhoselisa ubani nesithakazelo yokuphisa abathanda ukunambitha ezintsha nezithakazelisayo besizulu. Lena akuyona nje isiphuzo, kodwa futhi ukuthuthukisa ulwazi lwabo ayemthanda oludakayo isiphuzo. isethulo Brewer sika, kusihlwa evumelanisiwe, Uxoxa abaqoqi nabo - konke lokhu kungatholakala ku "nenhlonipho ubhiya".
Bheka kubha hhayi kuphela ukuze unqobe mug noma ezimbili nengxoxo ethakazelisayo ubhiya futhi noma yini ehlangene nakho. Ngezikhathi zakusihlwa, abalandeli ngokuvamile ndawonye ukuze ibuke ukufana ezemidlalo kumbuthano we ukuhlonishwa abangane nalabo. Futhi njalo ngeSonto lesithathu enyangeni enkantini "Beer Ukuziphatha" ophethe umhlangano we Petersburg club abaqoqi ubhiya izesekeli. Imihlangano enjalo zingatholakala izinto eziningi ezithakazelisayo ngalokhu isiphuzo oludakayo.
Abasunguli be-bar wazama kuyoba mnandi ukuba kusimangaze izivakashi zakho nge besizulu engcono ukwenziwa Breweries elincane enhlokodolobha enyakatho. Ufuna zibe "Beer Ukuziphatha" ngokokuqala ngqa, ungakwazi kalula ulahleke ezihlukahlukene ukukhetha wophuzo iziphuzo ukuze ivumelane zonke ukunambitheka nombala. Kodwa ungakhathazeki, futhi akufanele bathathe into yokuqala ongena amehlo akho. Abasebenzi ibha kulula ukuxhumana futhi ujabule ukweluleka uphuza elihlangabezana izintandokazi zakho, tshela okwengeziwe grade Vending, ngisho ukunikeza ambalwa ongakhetha ukunambitha.
Njengoba kulindeleke kusukela pub ezinhle, okuyinto ngokungangabazeki fanele "Beer Ukuziphatha" ubhiya imenyu lisabalele, kukhona ekubhaleni futhi asemabhodleleni, futhi ekubumbeni. Ezinye izinhlobo "ivame ukuya kulezi bar" futhi uhlale etholakala, abanye ngezikhathi ezithile esikhundleni nomunye. Thina uzokutshela mayelana ezimbalwa.
Ngokwesibonelo, "Vaclav zethusi" - amber ansundu ubhiya elingezansi oludakisayo nge ukukhanya ukuthungwa kanye Airy ezimhlophe Foam. Isiphuzo uyaqabula, wezwakalisa malty omnene ukunambitheka. "Landskrona el" - kwi ubhiya Kunalokho, uyinkimbinkimbi kakhulu futhi obukhulu, kodwa flavorful kakhulu umbala amabhilikosi avuthiwe. It has a ukufutheka ngokulinganisela futhi uphinyiswa malty ukunambitheka ukwakheka kanye ephelele amanothi Uju-udakiwe. Olunye uhlobo ukuthi uhlale etholakala at the bar - "Kexholm Porter" - kuyinto opaque ale amnyama ephethe ukunambitheka elikhethiwe okusanhlamvu okugazingiwe lwemithombo okuqukethwe ezijulile. Abathandi ubhiya okuhle amnyama, ngokuqinisekile siyabazisa.
Bed hop izinhlobonhlobo siphuzo ngokulinganayo ezithakazelisayo. Ngokwesibonelo, ubhiya ngagama ekhumbulekayo Die Another Day. Ibizwa nangokuthi iwayini ibhali, elinesimo kwabantu high namandla (10%), kodwa ngesikhathi esifanayo, lumnandi, ephethe ukunambitheka multi-egqinsiwe futhi azibamba iphunga okubabayo. Noma kakolweni ubhiya Ukolweni ndlu zihlukaniswa amanothi elinuka ku ulwanga nge lika evelele banana kanye clove okubabayo. It has a cap obukhulu aminyene Foam, engaphuzanga kalula futhi wesilisa.
I okunezinhlobonhlobo ubhiya asemabhodleleni ingaphezu ocebile. Yini kuyitfola emashalofini kwebha "Beer Ukuziphatha"! Ake sibheke ezinye izinketho ezithakazelisayo kakhulu.
Beer ngagama elikhanyayo "Indlu MD" asemabhodleleni nge myuzle ukhokho. Lokhu ale, ukwenziwa isitayela Belgian blonde: ukunambitheka kwako yakha amanothi ezithambile imvubelo nemifino, izinongo, ukunambitha malty, enamandla egcwele, ne aftertaste elikhanyayo enwetshiwe. Olunye uhlobo ezithakazelisayo - dyubbel "Bluebeard". Lokhu double ukuvutshelwa ubhiya, ukwenziwa eBelgian isitayela, nge yesibili ukuvutshelwa egabheni. It libhekene amandla okusezingeni eliphezulu kanye kwabantu, kodwa ukufutheka ongaphakeme ukunambitheka. Ukwenziwa kusukela izinhlobo ezine lwemithombo kuthiwa ngokuphawulekayo kuyofikwa ukunambitheka. Abathandi ikhofi kanye ubhiya emnyama uzongithanda Coffee Staut, obonisa ezijulile, ukunambitheka ocebile nge lika liphinyiselwe ushokoledi kanye nekhofi.
Yiqiniso, "Beer Ukuziphatha" ngeke sikunikeze ukukhetha ebanzi kakhulu futhi ezithakazelisayo, siphinde wayeka ukunakwa yayo kuphela kwamanye esimthandayo izinguqulo.
Lapho kukhona ubhiya futhi obuseduze izingxoxo kufanele ukudle. Futhi akazange ukudanisa nge ekhishini "Beer Ukuziphatha", ukubuyekezwa zazo zinhle ngempela. Ungadla lapha like ubhiya lelisetulu. Qiniseka ukuzama inhlanzi no shizi crab amabhola nge garlic - njengoba fun okuningi wadlala zonke izitsha ajwayelekile. Akufanele bayeke ku Ungadla neSpanishi-isitayela - pintxos (Baguette nge ukugcwaliswa) nemifino anchovies, i-tuna, namasoseji kanye anyanisi nekharameli. Ungadla ezithakazelisayo futhi yenkomo, inkukhu kanye ingulube chips. Kukhona Burgers, futhi izitsha ashisayo (Steak nazo zonke pyureshechkoy ozithandayo ngempela okuhle), ngisho pancake. Hungry ngeke uwushiye lapha, kanye esisangulukisayo.
Ingaphakathi umoya bar
uphawu Nondescript emnyango offset umbhikisho imibala egqamile kule Interiors kwebha. Uma uthi nhlá kungase kubonakale sengathi lokhu akuyona pub, futhi yokudlela zaseMpumalanga. Kepha njengoba masinyane njengoba ubona ibha eside, elaligcwele nswi lenqwaba ubhiya amabhodlela ngamalebula egqamile odongeni eduze amatafula washaya uchungechunge ubhiya coasters, eqoqwe ngokucophelela abasunguli, isihenqo East luyaphela.
Hlala ukhululeke ujabulele - ubhiya, ingxoxo, football okufanayo futhi zonke nomkhathi ebusa emhlabeni. Lapha ungakwazi phumula futhi bakhohlwe ngempela isikhashana mayelana nezindaba kumbuthano efanayo Ongoti ubhiya okuhle. By the way, amantombazane ungathandi ibha ngaphasi kunabobabe. Noma kunjalo, ngizungezwe amadoda futhi ubhiya esiphundu, akukho nobuhle is hhayi unesizungu.
Izinkinga "Beer nenhlonipho"
Ngesinye isikhathi esededelwe, ngoba bar, kanye yayo izivakashi, emkhathini lapha isibe hhayi kakhulu kamnandi. Abanikazi enkantini bahileleka kule adventure, wanquma iqhaza umbukiso "ngesikhathi loggerheads" nge Konstantin Ivlev. Kusukela imizuzu lokuqala ukuqopha abasunguli waqaphela ukuthi inqwaba, kodwa kwase kwephuze kakhulu ashona. Ukufunda mayelana nokudutshulwa chef ushiye pub, ukuze zonke izinkinga futhi kwamaphutha ekhishini kwakufanele bambe sous-abakhulu. Kwakukhona okuningi imibono, amemeza ukucindezeleka - nakuba iningi ke kwadingeka ukuba ukhanyise okwesikhashana ikhamera. Njengoba Bathi abanikazi, Constantine - kuhle kakhulu ngisho umuntu onobungane, kodwa ifomethi ukudluliswa kudinga "inkanuko mat."
Phakathi nesimiso omningi iye yenziwa emazweni ngamazwe, eziqala ekhishini futhi kokuqeda wezangaphakathi. Lesi sakamuva, ngenhlanhla, akunjalo ngempela bathandile kokubili izivakashi kanye abasunguli kwebha (kodwa usuqaliwe, kwakungenakwenzeka ukubohla). Ikakhulukazi hhayi isihloko babe amaphosta elikhanyayo pop art isitayela. Ushintsho imenyu ezingaphezu kuka ukuthanda - ukuthi uConstantine nozakwabo ujabulise nemigoqo yomphakathi, kanye ukunikezela izinga ukudla, futhi uhla wavuselwa ezingeni eliphezulu. Dlulisela "ngesikhathi loggerheads" ayibanga yize, kwakukhona izinguquko eziningi. Akubona bonke babo babenomusa, kodwa abanikazi namanje basutha, kanje isipiliyoni esihle wonke "isikhungo disassembly."
Asinakusho ukuthi "Beer Ukuziphatha" ngemva iphrojekthi enjalo ilahlekelwe inhlonipho izakhamuzi, kodwa abaningi babengafuni ukuba sishintshe. Ngakho-ke, ngemuva kokuphela ukuqopha ezinye izinto Olga futhi Anton sebebuyela ezihlalweni zabo (kuhlanganise imenyu izinto). Ngesikhathi ibha, usengakwazi isikhathi esikhulu, ukujabulela izinga okusezingeni isiphuzo oludakayo futhi ingxoxo uweta wotshwala enkantini ku yokuphisa lesi siphuzo. Lena into ebaluleke kakhulu esimweni pub, futhi abanikazi nabasebenzi izikhungo wakwazi ukulondoloza.
"Ice Bar" Kaluga: isithombe, ukubuyekezwa
Imininingwane abathandi isilwane: kanjani nokuthi yini ukondla amakati lactating
Ukwazi nje ukuthi isiko kudoti
Uhambo lokuya nokubuya Georgia ezintabeni - iholide ngiyilibale
Emkhakheni wezitho zokwenziwa esikhiphekayo esikhathini sethu